वायु प्रदूषण : कसरी जोगाउने आँखा ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्वास्थ्य वायु प्रदूषण : कसरी जोगाउने आँखा ?
१८ चैत्र २०७७, बुधबार १६:१५
अहिले वायु प्रदूषणले देश तथा विदेशमा पनि प्रभाव पारेको छ । दूषित हावाका कारण हामीले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु भोग्नु परिरहेको । यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरले हामी दिन–दिनै विभिन्न रोगका शिकार बन्दै गएका छौं । वायु प्रदूषणका कारण विभिन्न समस्याहरु जस्तै सास, छाला, घाँटी र आँखाका समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । जसमा आँखा पोल्ने समस्या धेरै देखिन थालेको छ ।
वायु प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थसँग–सँगै आँखामा पनि नराम्रो असर पु¥याइरहेको छ । यदि तपाईं पनि वायु प्रदूषणका कारणले केवल श्वास–प्रश्वासलाई मात्र प्रभावित पार्छ भन्ने सोच्दै हुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । प्रदूषित वायुले आँखालाई पनि प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु आवश्यक छ । किनभने खराब वायुले आँखामा विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउन सक्छ । जसले गर्दा कर्निया पनि हुनसक्छ ।
धेरै पानी पिउनुपर्छ, जसले तपाईंको शरीरलाई राम्रोसँग हाइड्रेटेड राख्छ । यी कुरा त्यो बेला अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । जब बाहिरी कारक जस्तै केमिकल तथा धुवाँ तपाईंको ड्राई आईजको लागि खतरा बन्छ ।वायु प्रदूषणबाट आँखालाई सुरक्षित राख्नको लागि स्वस्थ खाना खानुपनि अति नै आवश्यक छ । त्यस्तो खानेकुरा जसमा फलफुल र तरकारी पर्याप्त मात्रामा समावेश हुन्छ ।
विशेष गरेर आफ्नो डाइटमा गाजरलाई समावेश गर्नुपर्छ । किनभने गाजर आँखाका लागि अति नै फाइदाजनक छ । त्यसमा भिटामिन ए भरपुर मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन ए आँखालाई स्वस्थ राख्नका लागि अति नै राम्रो मानिन्छ ।यदि तपाईंको आँखा वायु प्रदूषणको कारणले पोलेको छ भने माथि उल्लेखित जानकारीहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । Source: onlinekhabar
नरिवल पानी : उच्च रक्तचापदेखि छालाको रोग हटाउनसम्म सहयाेगी
एकसाथ धेरैजना बेहोस हुनेगरी ‘मास हिस्टेरिया’ किन र कसरी हुन्छ ?
नुन र चिल्लो पदार्थको बढी प्रयोगले पनि बिग्रन्छ मिर्गौला